अश्लीलको शारीरिक प्रभाव | इनाम पुरस्कार
स्वास्थ्य अश्लीलको शारीरिक प्रभाव
धेरै युवाहरूले अश्‍लील सामग्रीलाई कसरी हेर्ने भनेर वयस्क लि adult्गको संसारको बारेमा विचारहरूको स्रोतको रूपमा हेर्छन्। दुर्भाग्यवस अश्लील साइटहरू जोखिम वा हानिको बारेमा चेतावनीको साथ आउँदैन। यो आनन्द र मनोरन्जन को एक अन्तहीन आपूर्ति को रूप मा आफैँ लाई बढावा दिन्छ। सबै सम्भावित लत पदार्थ र व्यवहार जस्तै, यो मस्तिष्कमा गम्भीर परिवर्तन र शरीरको अन्य भागहरु लाई हानी गर्न सक्छ।
पोर्न-प्रेरित ईमेलेटिभ डिससिशन
सब भन्दा डरलाग्दो शारीरिक परिवर्तन जुन पुरुषहरू, विशेष गरी आज 40० बर्ष भन्दा कम उमेरका धेरै रिकभरी साइटहरूमा पुरुषहरूले भनेका छन् इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) हो, कि तिनीहरू कठोर वा ठाडो लि att्ग प्राप्त गर्न सक्दैनन्। हेर्नुहोस् ED मा यो प्रस्तुतिकरण बुझ्न किन। अरूहरूको लागि, ढिलाइ स्खलन वा वास्तविक साझेदारहरूको सुस्त प्रतिक्रिया साधारण छ। नोट गर्नुहोस् उनीहरूले ईडीको अनुभव गर्दैनन् अश्‍लील सामग्री प्रयोग गर्दा, जब तिनीहरू वास्तविक पार्टनरसँग सम्भोग गर्ने प्रयास गर्छन्। यसको मतलब पार्टनरहरू बिना धेरै पुरुषहरूले उनीहरूले महसुस पनि गर्दैनन् कि उनीहरूले इरेक्टाइल समस्या विकास गरेको छ।
केम्ब्रिज विश्वविद्यालयका प्रमुख शोधकर्ता वैलियर वोनले भने:
"[स्वस्थ स्वयंसेवकहरूको तुलनामा [पोषण नपुगेको] यौन यौन सम्बन्धमा यौन आकस्मिक र अधिक अत्यावश्यक कठिनाइहरूसँग अझ बढी कठिनाइ थियो तर यौन सामग्रीको लागि होइन।"
यसले गम्भीर समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ जब दम्पती सँगै हुन्छन्। या त पार्टनरले यौन प्रदर्शन गर्न सक्षम नभएको वा अप्ठ्यारोमा यौन इच्छा जगाउन सक्षम नहुनको लागि अपर्याप्त महसुस गर्न सक्छ। यसले धेरै मानिसहरूलाई धेरै शर्म र शर्मिन्दाको कारण बनाएको छ, र उनीहरूको साथीहरूमा विचलित र असफलताको भावनाको कारण छ।
यो उत्कृष्ट हेर्नुहोस् लेख अभिभावकबाट बोलाइएको छ "के अश्‍लील युवा पुरुषहरूलाई नपुंसक बनाउँदैछ?"
उदाहरणका लागि, परम्परागत समुदायका एक जवान मानिस जसले आफ्नी बिहे नगरेसम्म आफ्नी छोरीलाई कुमारी बनाइरहेका थिए उसले अश्‍लील विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिरहेका थिए। जब उनी र उनकी श्रीमतीले बिहे गर्ने प्रयास गरे, उनी यौन शोषण गर्न असमर्थ थिए। दुई वर्षसम्म यो केस रह्यो किनकि उसले आफ्नो अश्लील प्रयोगलाई यौन नपुंसकतासँग जोडेन। यस समयमा उनकी श्रीमतीले उनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको बताइन्। संयोगवश मात्र त्यो युवाले ग्यारी विल्सनको भेट्टाए TEDx कुरा, पत्ता लगायो कि लामो समयसम्म अश्लील प्रयोगले इरेक्टाइल विफलता निम्त्याउन सक्छ र उसको रिकभरी सुरु गर्न सक्षम भयो। उनकी श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छेदको कार्यवाही बोलाइन्। इन्टरनेट पोर्नोग्राफीले कति बढि विवाह र सम्बन्धहरूलाई असर गरिरहेको छ?
शुभ समाचार यो छ कि जब पुरुषहरू इन्टरनेट अश्‍लील कुरा छोड्छन्, तिनीहरूको इरेक्टाइल कार्य पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले केही हठी मामिलाहरूमा महिनाहरू वा वर्षहरू लिन सक्दछ। अनौंठो कुरा के यो युवा पुरुषहरु लाई आफ्नो पुरुषहरु भन्दा उनीहरुको "मोजो" लाई पुनः प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्छ। यो किनभने बुढेसकालका पुरुषहरूले म्यागजिनहरू र फिल्महरूमार्फत उनीहरूको हस्तमैथुन क्यारियर सुरू गरे र अश्‍लील कुराको तिनीहरूको सम्पर्क सामान्यतया गहिरा थिएन र गहिरा सिर्जना गर्न पर्याप्त टिकाउ थिएन। यौन क्यान्सर र इन्टरनेट भिडियो अश्लील देखाउने बाटोहरू सिर्जना गर्दछ। युवा पुरुषहरू अश्लील र हस्तमैथुन प्रयोग गर्छन् धेरै लामो अवधिका लागि उनीहरूको कल्पनाहरू, पुरानो ढंगले प्रयोग गर्नुको सट्टा।
यहाँ केहि अनुसन्धान निष्कर्षहरू छन्:
• इटाली 2013: उमेर 17-40, अधिक साना रोगीहरू पुरानो (49%) भन्दा पुरानो विफलता खराब (40%) थियो पूर्ण अध्ययन उपलब्ध छ। यहाँ.
• यूएसए 2014: उमेर 16-21, 54% यौन समस्या; 27% Erectile Dysfunction; 24% orgasm सँग समस्याहरू। अनुसन्धानको सारांश उपलब्ध छ यहाँ.
• यूके 2013: 16-20 उमेरका केटाकेटीहरूको पूर्वी पूर्वी लन्डन विश्वविद्यालयले "वास्तविक यौनको लागि उत्तेजक रूपमा अश्लीलमा निर्भर" थिए यसमा एक प्रेस लेख उपलब्ध छ यहाँ.
• मा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय 2014, औसत उमेर 25 मा अध्ययन, तर 11 को बाहिर 19 ले भन्यो कि अश्लीलले सहयोगीहरूको साथ ईडी / कम लिम्दोको कारण प्रयोग गर्दछ, तर अश्लील सँग होइन।
पोर्नले यौन सम्बन्धमा भौतिक शक्ति गतिशीलतालाई असर पार्न सक्छ
पुरुष र महिलाको बीच शक्ति सम्बन्ध मा धेरै दशक को सुधार पछि, त्यहाँ केही पुरुषहरु अधिक प्रभावशाली र आक्रामक हुँदै छन् कि धेरै हालसालै प्रमाणहरु छ, विशेष गरी यौन सम्बन्ध मा। यो अवांछनीय आचरण पुरुषको ईन्टरनेट अश्‍लील सामग्रीको उपभोग द्वारा केही हदसम्म चलाइएको देखिन्छ।
A 2010 अध्ययन सर्वश्रेष्ठ बिक्रेता डीभिडीको सामग्री फेला पर्यो कि 304 दृश्यहरू विश्लेषण गरिएको, 88.2% ले भौतिक आक्रामकता, मूलतः पिसाब, ग्यागिंग र स्लिपिंग समावेश गर्दछ, जबकि दृश्यहरूको 48.7% मौखिक आक्रामकता, मुख्य रूपमा नाम-कल्याण समावेश भएको थियो। आक्रामकता को सचेतता सामान्यतया पुरुष थिए, तर आक्रामकता को लक्ष्य अत्यधिक महिलाहरु थिए। लक्ष्यहरूले प्राय: प्रायः देखाए वा आक्रामकतालाई तटस्थ रूपमा प्रतिक्रिया दिए।
यस अनुसन्धानमा निर्माण एउटा नयाँ प्रकाशित जर्मन अध्ययन छ जसले पाएको व्यक्ति सबैभन्दा अधिक शक्तिशाली र यौन सहकर्मी व्यवहारहरू थिए जुन प्रायः प्राय: पोर्नोग्राफी खरिद गर्थे र नियमित रूपमा यौन सम्पर्क गर्नुअघि वा नियमित रूपमा शराब खानुपर्छ।
यो अध्ययन पोर्नोग्राफीको हालको विश्लेषणमा अवलोकन गरिएका विभिन्न प्रभावकारी व्यवहारहरूमा जर्मन हिटरोजुलुअल पुरुषको रुचि र संलग्नताको सर्वेक्षण गरिएको छ। लोकप्रिय पोर्नोग्राफिक चलचित्रहरू हेर्न वा धेरै पटक अश्लील पोषण हेर्नका लागी चासोमा पुरुषहरूको इच्छा संलग्न भएको थियो वा पहिले नै व्यवहारमा संलग्न हुन्छन् जस्तै बाल निकाल्दै, अनुहारको अनुहारमा अनुहारमा एक साथी, अनुहार भंग, विनाश, डबल-प्रवेश (फोटो फिचर) यद्यपि एक साथीको गुलाब वा योनि सँगै घुसाउने अर्को व्यक्तिको साथमा), गधा-मुख-दाँत (जस्तै एक साझेदारलाई घुमाउँदै र त्यसपछि लिंगलाई उसको मुखमा घुसाउनुहोस्), पेनिलेट ग्यागिंग, चेहरे स्लिपिङ, चकलेट, र नाम-कलिंग (जस्तै " फूहड़ "वा" वेश्या ")। शराब र पोर्नोग्राफीको प्रभावमा अतीत प्रयोगात्मक अनुसन्धानका साथ यौन दुर्व्यवहारको कारण पुरुषहरु भन्दा प्रायः प्रभावकारी व्यवहारमा लागेका पुरुषहरु थिए। प्रायः प्रायः अश्लील पोषण गरिन्छ र यौन सम्बन्धमा नियमित रूपमा भोज लिन सकिन्छ।
गुदा सेक्स र अन्य हिंसक यौन व्यवहार
त्यहाँ धेरै सबूतहरू छन् जुन अश्लील गतिविधिहरू देख्न सकिन्छ जुन धेरै भिजुअल उत्तेजक हुन्छन्, मौखिक सेक्स, डबल प्रवेश वा अनुहारमा ठिकै छन्। यद्यपि कलाकारहरू भुक्तानी वा सम्वन्धित भएका छन् कि तिनीहरू सामान्यतया विकल्पले गर्दैनन्। धेरै महिला पोर्न स्टारहरू अश्लील उद्योगमा लिप्त छन्।
इन्टरनेट अश्लील सामान्यतया एक अनियमित वातावरणमा बनाइन्छ। यसले अक्सर गतिविधिहरू देखाउँछ जुन स्वास्थ्यमा सम्भवतः खतरनाक हुन्छ। उदाहरणको लागि त्यहाँ "ब्याकब्याकिंग" को व्यापक प्रयोग हो जुन जुनसुकै यौन सम्बन्ध हो, सामान्यतया गुदा सेक्स हुन्छ, कन्डोम बिना। कन्डोमको प्रयोगले यौन चित्रण गर्दछ जुन कम वास्तविक र कम दृश्य प्रभावको साथ देखा पर्दछ। कन्डोम अश्लील निर्माताहरूबाट बच्दा शरीरमा तरल पदार्थको अधिकतम आदानप्रदान देखाउन सकिन्छ, 'सबै भन्दा यौन सेक्स' छ र तपाईंको यौन जीवनको लागि जोखिमपूर्ण विकल्पहरू प्रदर्शन गर्दछ।
मेडिकल र यौन स्वास्थ्य व्यवसायीहरूले सिफारिस गर्छन् कि सबै नयाँ साझेदारहरू उनीहरूका लागि - यौन रूपान्तरित इन्फेक्शनहरू (एसटीआई )का सम्भावित स्रोतहरू छन्, जसलाई एचआईभी / एड्स सहित। वास्तविक पार्टनरसँग यौन सम्बन्धमा संलग्नता एक जोखिमपूर्ण कुरा हो। यो तपाईं र तपाइँको साझेदार माथिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न माथि छ।
<< मानसिक प्रभावहरू तनाव >>